SOMALITALK - BOGGA SHIINE
Difaaca suugaanta iyo abwaannada
XAMUUD AXMED CABDALLA [SHIINE]
Dhammaantiinba naga guddooma salaam qaali ah. Gabaygan la magac baxay DIFAACA SUUGAANTA IYO ABWAANNADA waxa tiriyey Maxamud Axmed Cabdalla [shiine]. Gabaygu wuxu tusaale ka bixinayaa sida fool xumada ah ee dad badani u marin habaabiyeen ujeeddooyinkii suugaanta soomaaliyeed iyo abwaannadii isku hawlay suugaantaas taariikhiga ahayd hadafkoodii.
Waxa layaab noqotay, hadda oo waddankii burburay in wax kasti sidoodii ka duwan yihiin. Tusaale ahaan, xagga suugaanta, iyadoo aad looga faa’iidaystay aaladda internet-ka, ayaa qolyo badani u waabteen bogag ay ku dhantaaleen suugaantii soomaaliyeed. Bogaggaas waxay samaysteen magacyo qurux badan sida: Hoyga suugaanta, Doollo, Golkhaatumo iyo kuwa kale oo badan. Dadka bogaggan qoraa waa kuwo qabiilaystayaal ah, weliba waxayba isku qabsadaan marmarka qaarkood gabayo dalka caan ka ah inuu lahaa Salaan Carrabey, Cali Dhuux, Daadey ama, Sayidkii. Si kasta ha ahaatee, waa mid khalada in suugaanta ilaahay dadka hibada u siiyo la huwiyo magac reer. Sidoo kale, haddayba jirto in reerkaad ka dhalatay ay jiraan kuwa badan oo gabyaa, waa inaad si xaqa wax uga qorto, isla markaa aadan bara dheeraysiinin raggii iyaga ka cuslaa xagga gabayga. Bal soomaaliyeey ila eega bogaggaas. Midba siduu uu rabey ayuu ugu talax tegey ka beensheegidda taariikhda suugaanta soomaaliyeed.
Waxan ku gebagebaynaynaa faalladan, Gabaygani waxa uu iftiiminayaa hadimada qarsoon ee ay geysteen dad badani, wuxuna dadka uga digayaa inay ka feejignaadaan taariikhdaa been abuurka ah. Xaqiiqdii, qola walba maanta kuwii ugu liitey ayaa diiradda u qabtay si ay u samaystaan taariikh iyaga raalli gelisa. Ilaah baan idin ku dhaarshee nin gob ahi waxaa kuma keceene, ee soomaaliyeey dadkaa iska jira.
Kuwiinnaa ku habayaaqsadee, marin habawsiiyey
Hagar baad ka geleysaan murtida, hadalka suugaane
Gabaygiiba reer hebel, ayaad hibo u siiseene
Magacaad huwinaysaan bahdiin, waa hufiyo beene
Harag laba dhan loo jiidaybaad, ku hawiraysaane
Haaddii ka qaday baad tihiin, haybad iyo reere
Qola waliba hoodaale iyo, hawlkar laga beerye
Hooshaarna way leeyihiin, heerya cunayaale
Haybsooca iyo aanadiyo, hurinta baaruudda
Halyeybaa ka fiirsada colaad, oo hubsiimalehe
Hiil maalinkay taagantahay, ay fidnadu huurto
Hariiryaale lama haybsan jirin, fule habaas weyne
Halowdiisa maadhiinka iyo, meel jikre hugmaayo
Ragga kii hungada loo yiqiin, habar ka liiteeye
Haweenkiyo carruurtuu dhexdood, hoorri ku ekaaye
Hadaaqiisa waa lagu yiqiin, inuu halmaamaaye
Hawhawda faanka ah, waqiis waa habayn jiraye
Idinkuna hantaataca tabtiis, kama hagaagtaane
Haaweey dhasheedbaa qabiil, soo hadoodiliye
Magacii hallaysoo, abwaan heerte sharaftiise
Haydaaradii qaranka iyo, kala hoggii beesha
Habqankii u kaday baad tihiin, cadow halgaaddiise
Wexeeraad bog hoogaamiseen, hadimo loo waabay
Hoygeeda suugaanta iyo, la huwin naanaysta
Sheekada halbaarkeeda iyo, haarta iyo boogta
Hudidda iyo kala haadintiyo, hadafin taariikhda
Hiyigiinna sida habar dugaag, hilib ku hooshoodka
Hamba qaariddiyo kala hufkiyo, haari ugu boodka
Waa hadullayaan damicii iyo, la hadh hummaagiise
Huluulaha nacayb lagu hirgelin, waa halaanhalide
Halbacaad ku godol weeye oo, gubad ku haaneede
Hurgumo iyo waabay, waxaad heensateen dhacare
Hoodaddaamadiinniyo dhibkaba, guulle naga haye
Hor ilaahay idinkaa la tegi, waxad humaysaane
Hooliflaha iblayskaad, rafiiq ugu hagaagtaane
Hoy aakhiriyo duniba, wuu idin hagaayaaye
Hoobaaqda idinkaa ku dhici, waxad hagoogteene
Hagarlaawe daacada, ayaan horow digaayaaye
Soomaali haayir iyo tuug, haatan laga daalye
Hammigiin ka jara, inaannu nahay hoos u wada jeeddo
Abwaanka waxad kala xidhiidhi kartaan Email: mohamoud@ameritech.net ama , abdall02@email.franklin.edu
BBC-du daacadnimo ka dheer II | Digaarka & Abwaanada